Nauta Hogar: Fitaovana Iray Ho An’ireo Kiobàna Mpandraharaha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Septambra 2018 7:09 GMT
Sary: MONK (Periodismo de Barrio). Nampiasaina nahazoana alalàna.
Nandritra ny taona maro, ny fahazoana aterineto tao Kiobà – firenena iray eo amin'ny laharana faharoa amin'ny fahazoana an'ireo teknolojian-tserasera any amin'ny faritr'i Amerika – dia mbola mifofotra hatrany mihazakazaka mikatsaka ireo karazana famoronana hafa.
Fomba maro no nahomby tamin'ny dehatra isankarazany: ireo kaonty Enet, tolotra iray nomen'ny Orinasan-tserasera ao Kiobà (ETECSA) ho an'ireo mpiasa aminà andrimpanjakana ao amin'ny governemanta; faritra WiFi sy aterineto ho an'ireo hotely ary ireo faritra ho an'ny fizahantany; ireo foibe Nano izay mamatsy aterineto WiFi isankarazany ho an'ny tokantrano, sy ny SNET ho an'ireo aterineto miafinafina tsy ara-dalàna, ankoatr'ireo hafa.
Tanaty andrana ho fanatsaràna ny tolotra Aterineto eo amin'ny firenena, nanapaka hevitra ny governemanta ny hanomboka ny Nauta Hogar, volavolan-kevitra iray ho an'ireo mpanjifa eo an-toerana, izay nanatsara ny fomba fandraharahàn'ireo orinasa mikasika ny teknolojia tsy miankina, .
Lalana iray miholikolika ho an'ireo mpandraharahan'ny teknolojia
Tamin'ny taona 2010, rehefa nankatoavina ireo fahazoandalana ho an'ireo tsimoka orinasanà teknolojia an'ny tsy miankina, 18% ny tahan'ny fidirana amin'ny aterineto tao Kiobà ary tany amin'ireo faritry ny fizahantany sy ireo ivontoeram-pikarohana sy fanadihadiana, ary orinasa sy ireo andrim-panjakana, no tena nihandronany voalohany indrindra. Tamin'ny taona 2016, nitombo avo telo heny ireo fahazoandalana ireo ary nametraka toerana hahafahana miditra amin'ny WiFi teny an-kianja ho an'ny daholobe i Kiobà. Tondroin'ny Diarin'ny antontanisa tao Kiobà tamin'ny taona 2016 (navoaka tamin'ny taona 2017) ho ny 40% n'ny mponina no nahazo fidirana tamin'ny Aterineto, na mpampiasa miisa 4 529 000 amin'ny mponina mitontaly 11 tapitrisa.
Na teo aza ireny fandrosoana ireny, fanamby natrehan'ireo Kiobàna mpandraharaha ny fanandramana hiasa tsy misy aterineto haingam-pandeha, izay mametra ny fahafaha-mamokatra. Raha ny voalazan'i Alberto Castro, tompon'ny orinasa Celulares 41 hoe:
…rehefa tena misy torohay manokana ilaina, tsy maintsy entinay any amin'ny hotely ny solosaina finday. Matetika, ny asa izay tsy mitaky afatsy 20 minitra dia manjary atao anatin'ny adiny iray sy sasany na adiny roa.
Alberto Castro, tompon'ny orinasa Celulares 411, eo amin'ny làlana Obispo (Sary: Julio Batista. Periodismo de Barrio. Nampiasaina nahazoana alalàna.)
Zatra nividy rindrambaiko betsaka ny Avansys, orinasa iray mpanamboatra solosaina finday, mba hamahàna ireo olan'ny fahazoany aterineto. Nandritra io fotoana io, tao amin'ny MovilServer, nampifandimbiasina tamin'ny fitrohana ireo vaovao avy any amin'ireo mpanelanelana, izay matetika no avy amin'ny governemanta, ny fividianana an'ireo rindrambaiko ireo.
Nauta Hogar: Mizotra mankamin'ny fampifandraisana toeramponenana
Ny fanentanana voalohany niely patrana nikendrena ny hampifandraisana an'ireo trano fonenana tamin'ny alalan'ny aterineto dia niandraiketan'ny ETESCA (orinasam-pifandraisandavitra eo ambany fiahian'ny fanjakàna) ary notanterahana teo anelanelan'ny 19 Desambra 2016 hatramin'ny 28 Febroary 2017. Io no fiandohan'ny Nauta Hogar sy ny andrana modeliny, izay nanome tolotra Aterineto ho an'ireo trano fonenana 2 000 tao Old Havana. Mifototra amin'ny teknolojia ADSL ny Nauta Hogar ary mivarotra izany amin'ny vidiny narafitra avy amin'ireo ora ampiasàna azy, ahitàna fampiasàna mahatratra hatramin'ny 30 ora isambolana. Tamin'ny faran'ny taona 2017 sy tamin'ny fiandohan'ny taona 2018, dia tonga tao amin'ireo faritanin'i Matanzas, Cienfuegos sy Santiago an'i Kiobà ny Nauta Hogar.
Ny Celulares 411, ny Avansys ary ny MovilServer dia samy miorina ao amin'ny manodidina an'i Old Havana avokoa, ary samy tonga dia nanome fidirana amin'ny tolotra ETESCA avy hatrany. I Alberto avy amin'ny Celulares 411, i Héctor Venegas avy amin'ny Avansys ary i Jorge Fernández avy amin'ny MovilServer dia samy niaiky fa ny tombontsoa voalohany amin'io tolotra io dia ny hoe afaka mitroka vaovao ianao nefa tsy mandao ny birao akory mba hitady tolotra iray metimety kokoa.
Ho an'i Alberto, izay nisoratra tamina fifanekena tena lafo amin'ny vidiny 70 CUC (manodidina ny 70 Dolara) isambolana ho anà hafainganam-pandeha 4 Mbit/s sy fandefasana 512 kb/s, nanatsara betsaka ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisany ny Nauta Hogar.
Hector sy Jorge, izay niara-nanao sonia fifanarahana misanda 15 CUC (manodidina ny 15 Dolara), dia manamafy fa ny fahatongavan'i Nauta Hogar dia nanamora ny zavatra rehetra, na tsy nahavita nanafoana ireo fomba fanao taloha aza ny fisiany.
Héctor Venegas, teknisiana salantsalany amin'ny resaka Informatika sy mpikambana amin'ny tarika Avansys. (Sary: Julio Batista. Periodismo de Barrio. Nampiasaina nahazoana alalàna.)
Na dia niaiky aza i Héctor fa nividy rindrambaiko hatrany ny sosiety nahafahana niasa tsy misy tambajotra, lazainy ihany koa fa “Ao amin'ny Avansys, mampiasa [Nauta Hogar] izahay mba handefasana an'ireo pilotes manan-danja na ireo fanavaozana rindrambaiko ary hahazoana ireo torohay mifampidimpiditra. Fanampin'izay, mampiasa ny fotoanan'ny Aterineto ny Avansys mba hampahafantarany ny tolotra omeny ao amin'ny Revolico, ilay tambajotra goavana indrindra ao Kiobà amin'ny resaka dokambarotra voasokajy”
Tao amin'ny MovilServer, afaka nanatanteraka an'ireo asa fanamboarana haingana kokoa i Jorge ary mora kokoa ankehitriny ny mitroka an'ireo pilotes, ireo fampiharana, ireo angondrakitra ary ireo firmware – rindrambaiko madinika ho an'ny finday. Saingy rehefa mavesatra be loatra ny firmware, dia tsy maintsy mbola mandeha mitady fidirana aterineto tsaratsara kokoa.
Ireo fetra sasany mbola tokony ho resena
Na ahitana tombontsoa marobe aza ilay tolotra, ilaina ny manamarika ireo fetrany mifanmatotra amin'ny fampiharana azy sy ny fifanekena, izay ahitàna an'ireo fepetra manohitra ny fivarotana indray sy ny fampiasana ny aterineto amin'ny fomba iray hafa mety hanohintohina ny fiarovam-pirenena ao Kiobà. Ny fifanekena dia mandràra ihany koa ny fanaovana hetsika mifanohitra amin'ireo zo amin'ny fananana ara-tsaina na indostrialy, amin'ny alalan'ny fanosihosena ny tsiambaratelon'ny tena manokana na sosialy, sy amin'ny fanosihosena an'ireo fitsipika mifandraika amin'ny fanalàmbaraka sy ny fitondrantena tsy mendrika.
Ny pejy voalohany fidirana amin'ny Nauta Hogar. Sary: Julio Batista. Periodismo de Barrio. Nampiasaina nahazoana alalàna.)
Na izany aza, tsy misy iray amin'ireo azo oharina amin'ny fitarainana tena iraisana nalefa momba ny Nauta Hogar – ilay fetra 30 ora isam-bolana. Maniry i Alberto ny “hanana vidy raikitra sy tsy hanana ahiahy momba izay adim-pamantaranandro”. Ny vahaolana tsotra? Ny fomba fandoavana mifototra amina hafainganam-pandehan'ny Aterineto fa tsy ny fotoana nanaovana Aterineto.
Mazava ho azy, natokana ho an'ireo fialamboly ny ampahany amin'ireo 30 ora ireo fa tsy amin'ny asa. Héctor avy amin'ny Avansys, mitohy maharaka hatrany ireo zavabaovao amin'ny mozika sady mijery lahatsary. Raha toa ny ao amin'ny MovilServer indray, ampiasain'ny fianakaviana manana azy ny Aterineto mba hijerena imailaka sy ireo sata amin'ny Facebook. Na izany aza, na dia natokana ho an'ny asa fotsiny aza ny fotoana, mety mbola tsy ampy io.
Na eo aza ireo fetra ireo, niaiky ireo olona nanontaniana fa tsy azo lavina ireo tombontsoa. Hoy i Alberto:
..mendrika ho anao ny misoratra anarana mamandrika [amin'ny Nauta Hogar] […] Mba hifandray avy amina vohikala hafa, handoa vidiny mitovy ianao amina hafainganam-pandeha ambany sy tsy dia raitra loatra.